Usoro iji meziwanye arụmọrụ nke mmepụta ihe ọkụkụ na ọnọdụ nsogbu - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
Vladimir Groshev, Candidates of Agricultural Sciences, Director Nnọọ Nature (Italpollina S.p.A.) na Russia na CIS
Ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba na-apụta n'ụwa nwere mmetụta ozugbo ma ọ bụ na-apụtaghị ìhè na nhọrọ nke ụzọ nchebe na nri nri nke ihe ubi ugbo na Russia. Ya mere, n'ihi mmụba nke ọnụ ahịa nrụpụta na njem ụgbọ njem, fatịlaịza dị mgbagwoju anya na nke dị mfe ebiliwo na ọnụahịa, na n'ihi mmachi, a na-enye ọtụtụ ọgwụ na mba anyị n'otu oge. N'ihi ya, ọtụtụ ugbo na-eche echiche banyere njikarịcha, ya bụ, otu esi echekwa àgwà a na-eme atụmatụ ma na-emepụta ihe ngosi, ma, dị ka o kwere mee, belata ọnụ ọgụgụ nke fatịlaịza etinyere, zụta ọnụ ala, n'agbanyeghị na CPPPs na fatịlaịza nwere ike ghara ịdị na gburugburu ebe obibi.
Ahịa ahụ na-enye ọtụtụ ngwọta, ma n'isiokwu a, anyị ga-ejedebe onwe anyị n'ịtụle otu - site n'echiche anyị, ihe kachasị ọhụrụ na nke na-anabata mkpa osisi: anyị ga-ekwu maka iji ya mee ihe. peptide uto stimulants.
Peptides na amino acids bụ ihe dị mkpa na-ahazi n'ọtụtụ usoro biochemical nke osisi, n'ihi na ha bụ ihe ndabere nke protein. N'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị nchọpụta na-achọpụta na ọ bụghị amino acid nke ọ bụla, ya bụ Peptides na-arụ ọrụ dị mkpa na physiology osisi, dị ka akụkụ sel ndị a bụ isi na-arụ ọrụ dị mkpa nke ndu - ha na-agbanye usoro nchebe na nzaghachi maka nrụgide ma ọ bụ mwakpo pathogen / pest, kwalite metabolism na usoro physiological, na-achịkwa uto na mmepe osisi. Peptides bụ ogige kemịkalụ mejupụtara amino acid jikọtara site na njikọ peptide. Mkpụrụ ndụ peptide na-arụ ọrụ na ọkwa sel, na-eme ka ụzọ metabolic dị iche iche rụọ ọrụ: n'ezie, peptide ọ bụla bụ "igodo" emebere maka onye nata protein na-arụ ọrụ kpọmkwem - "mkpọchi" na akpụkpọ ahụ cell, ọ na-akpali physiological ma ọ bụ biochemical ọrụ. cell ma si otú ahụ na-emetụta uto na mmepe osisi.
Ndị ọkà mmụta sayensị egosila na peptides dị mkpụmkpụ na-abanye n'ahụ ahụ nke ọma na ngwa ngwa karịa polypeptides na amino acid free. Ozugbo ịbanye na osisi ahụ, obere peptides na-amalite ịrụ ọrụ iji dozie nsogbu na ọrụ nke osisi ahụ n'oge ugbu a, na-agafe usoro ndị chọrọ oge na ume.
Otu ihe atụ nke peptide stimulant bụ ihe dị ike nke ukwuu, 100% herbal nkwadebe - Ọzụzụ. Ọ nwere nnukwu mkpokọta peptides na-arụ ọrụ dị mkpụmkpụ (ruo 31%), usoro amino acid niile nke osisi, yana mgbagwoju oligosaccharides (10%), nitrogen organic (5%) na ogige ndị ọzọ na-arụ ọrụ ndụ. Ekele maka enzymatic hydrolysis na akụrụngwa akụrụngwa dị elu, Ọzụzụ nwere ọkwa salinity dị ala ma kwadoro maka iji ya na ọrụ ugbo. Ka anyị leba anya n'ihe kpatara ọtụtụ ndị na-akụ nri ji ahọrọ ọgwụ a.
Na-abawanye ọnụego na absorption ọnụego nke ịnweta nri
Photosynthesis bụ injin nke na-arụ ọrụ ihe ọkụkụ, yana ime ka ọrụ photosynthetic dịkwuo elu na-eduga n'iji nri, mmiri, ike ọkụ, nnabata CO₂ na imepụta biomass osisi. Ekwuputala na ojiji nke peptide uto stimulator Ọzụzụ Yana fatịlaịza soluble mmiri ma ọ bụ UAN, ọ budata (ruo 25%) na-eme ka nnabata nke nri sitere na fatịlaịza, nke na-echekwa ego nke akụ na ụba ozugbo ma hụ na a na-edobe ọkwa nke mkpụrụ ya ọbụlagodi na mbelata doses nke etinyere. fatịlaịza .
Mkpali nke uto nke ihe ngosi mma nke ihe ubi
N'otu oge na osisi, obere peptides Ọzụzụna ozugbo gụnyere na metabolic Filiks nke ahụ na-enweghị ọnwụ nke oge na ume efu maka mgbanwe nke inorganic bekee n'ime organic ndị. Ma ebe ọ bụ na peptides osisi na amino acid bụ ihe eji ewu ụlọ maka anụ ahụ ọ bụla, iwebata ha n'ime usoro nke imepụta ihe ọkụkụ na-eme ka ọrụ kacha mma nke akụkụ ahụ niile na-arụ ọrụ nke ọma na-eme ka nchịkọta nri dị na akụkụ ahụ na-emepụta ihe, si otú ahụ ozugbo. na-emetụta àgwà nke ihe ọkụkụ.
Na-abawanye iguzogide nrụgide abiotic
N'ịbụ onye ntinye uche nke peptides na amino acids, ọgwụ ahụ Ọzụzụ nwere mmetụta pụtara ìhè na hormonal itule nke osisi, ebe ọ na-enweghị ihe ọ bụla wuru ma ọ bụ eke homonụ, Otú ọ dị, ọnụnọ nke kpọmkwem peptide ụmụ irighiri ihe na ya mejupụtara na-akpalite mwepụta nke cascade nke biochemical mmeghachi omume na-eme ka mmepụta nke mgbochi nchekasị. homonụ site na osisi ahụ n'onwe ya, yana homonụ na-eto eto na itinye akụkụ ahụ na-emepụta . Ngwa Ọzụzụna tupu nrụgide (1-2 l / ha) na-enyere aka "ịkwado" osisi ahụ ma nyere ya aka ịnagide mmetụta nke ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-adịghị mma (okpomọkụ, ntu oyi, ụkọ mmiri, ntachu), na-ejigide usoro uto nkịtị. Ngwa Ọzụzụna n'oge ma ọ bụ mgbe nrụgide gasịrị (2-4 l / ha) ọ na-enyere osisi ahụ aka ịmaliteghachi anụ ahụ mebiri emebi ma laghachi na ọrụ dị oke mkpa ngwa ngwa.
Wepụ phytotoxicity na ịkwalite arụmọrụ nke HSPP
Na-agbakwụnye ọgwụ Ọzụzụ (0,75-1,5 l / ha) na ngwakọta tank na ọgwụ pesticides na-ebelata ibu nrụgide nke osisi a na-akọ ma na-ebelata ngosipụta nke phytotoxicity n'ihi mmụba nke metabolism na mmeghari anụ ahụ ngwa ngwa. N'otu oge ahụ, ụmụ irighiri peptide na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akpali akpali maka ntinye nke ihe na-arụ ọrụ kemịkalụ, si otú a na-eme ka mgbasa ozi na mmegharị nke herbicides ahọpụtara na anụ ahụ ahịhịa, na-abawanye arụmọrụ nke ọgwụgwọ yana mee ka o kwe omume ibelata doses. N'ọnọdụ ebe ihe ịrịba ama nke mmetụta phytotoxic apụtaworị, ọgwụgwọ mgbochi nrụgide na usoro nke 2-3 l / ha na-eme ka o kwe omume ịkwalite ọnọdụ osisi ma nọgide na-enwe ike ịmị mkpụrụ.
Na nke ahụ kwuru, peptide stimulant Ọzụzụ nwere ike na-akpọ ọganihu na ahịa nke stimulants. A na-atụ aro ọgwụ a maka ọgwụgwọ foliar n'ọnọdụ niile mgbe osisi ahụ nọ n'okpuru nrụgide na / ma ọ bụ mgbe achọrọ ya ka ọ nweta oke site na ụdị dị iche iche n'okpuru ala dị ugbu a na ọnọdụ ihu igwe nke mpaghara na-enweghị ego ọ bụla, nke dị mkpa karịsịa na. oge ugbu a.
Ụlọ ọrụ PRESTIGE AGRO LLC
Onye nkesa gọọmentị nke HELLO NATURE ("Italpollina")
Na nke nduku na akwukwo nri kụrụ nke oghe n'ala
Tags: "Prestige-Agro"peptide uto stimulants
Kuzbass na-arụsi ọrụ ike na-etinye ala gbahapụrụ agbahapụ
Ebe International Potato Center na-eme mmemme afọ iri ise